Izindaba - I-EV Platform Market
Imakethe Yesikhulumi se-EV
I-EV Platform Market (Ingxenye: Chassis, Battery, Suspension System, Steering System, Drivetrain, Vehicle Interior, and Others; Electric Vehicle Type: Hybrid Electric Vehicle and Battery Electric Vehicle; Sales Channel: OEM and Aftermarket; Vehicle Type: Hatchback, Sedan, Izimoto Zokusetshenziswa, Nezabanye; nePlatform: I-P0, i-P1, i-P2, i-P3, ne-P4) - Ukuhlaziywa Kwemboni Yomhlaba Wonke, Usayizi, Ukwabelana, Ukukhula, Amathrendi, Nesibikezelo, 2020 - 2030
Ukuqinisa Imithetho Yezemvelo kanye Nesidingo Esikhulayo Sezimoto Zikagesi Ukukhulisa Ukukhula Kwemakethe
Ngenxa yentuthuko yezobuchwepheshe ehlaba umxhwele nokuguquguquka komhlaba olawulayo, umkhakha wezimoto womhlaba wonke ubone izinguquko ezinkulu emashumini eminyaka adlule. Njengamanje, umkhakha wezimoto wamanje emhlabeni wonke uya ngokuya phambili ekusimeni nasekusaseni eliluhlaza, lapho ama-OEM kanye nabanye ababambiqhaza baphoqeleka ukuthi batshale imali kubuchwepheshe obusha kanye nezinto ezintsha ezihambisana nezimo zokulawula eziguqukayo. Kule minyaka eyishumi edlule, izimoto zikagesi zithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele. Yize ukuqwashiswa okuphathelene nezimoto ezisebenza ngogesi kuqhubeka nokukhula emhlabeni jikelele, ngakho, ukuthengiswa komhlaba wonke kwezimoto zikagesi kuyaqhubeka nokuhamba ngomgwaqo obheke phezulu- into okulindeleke ukuthi ikhulise ukukhula kwemakethe yesikhulumi se-EV yomhlaba.
Isidingo sezimoto zikagesi yinto ehamba phambili ekulindeleke ukuthi ishayele imakethe yesikhulumi se-EV emhlabeni wonke ngesikhathi sokuhlola. Izinkampani ezisebenza emakethe yamanje yesikhulumi se-EV ziya ngokuya zigxila ekunikezeni amapulatifomu e-EV angabizi futhi asebenze kahle kumakhasimende azo, nokuvala igebe lezindleko phakathi kwezinjini zezimoto zikagesi nezinjini zangaphakathi zomlilo (ICEs). Abadlali abaningana abasezingeni eliphezulu emakethe nabo kulindeleke ukuthi baqalise amapulatifomu e-EV amasha eminyakeni eyishumi ezayo- into engasiza ukukhula kwemakethe yesikhulumi se-EV yomhlaba ngesikhathi sokubikezela.
Ngemuva kwalezi zinto, imakethe yesikhulumi se-EV kulindeleke ukuthi idlule uphawu lwe-US $ 97.3 Bn ekupheleni kuka-2030.
Abadlali Bezimakethe Bagxila Ekuvaleni Izindleko Zezikhala phakathi kwe-ICE kanye Nezinjini Zikagesi
Yize ukufunwa kwezimoto ezisebenza ngogesi kubonile ukukhula okungaguquguquki eminyakeni embalwa edlule, idlanzana lama-OEM lenza inzuzo enkulu ngokuthengisa izimoto zikagesi. Igebe lezindleko elibanzi phakathi kwezinjini zikagesi kanye nama-ICE yisici esikhulu esilindelwe ukushayela izinto ezintsha nokuvula indlela yamamodeli wesikhulumi se-EV angabizi maduze. Izindleko eziphezulu zamabhethri kagesi ngesinye sezizathu ezibalulekile zokuthi kungani izimoto zikagesi zithengiswa ngentengo ephakeme kunaleyo ye-hybrid noma izimoto ezisebenza ekwakhiweni kwezimoto ze-ICE. Ngenxa yalokhu, abadlali abaningana abasebenza emakethe yesikhulumi se-EV bafuna izindlela ezintsha zokunxephezela lezi zindleko ngokugxila ekwakhiweni kwe-EV kwipulatifomu elingashisi nelingamamodeli. Ngenkathi ama-OEM amaningi esanda ukutshala imali ekwakhiweni kwamapulatifomu e-EV akhelwe inhloso yokwenza izimoto zikagesi, ezinye zithembele kakhulu ekwakhiweni kwezimoto ze-ICE ekukhiqizeni izimoto zikagesi. Emizameni yabo yokwenza ukukhiqizwa kwezimoto zikagesi kube nenzuzo, abadlali bezimakethe baya ngokuya bahlola imiqondo ehlukene, kufaka phakathi imigqa yokuhlangana elula.
Abadlali Bemakethe Bagxila Ekuqaliseni Izingxenyekazi Ezintsha ze-EV Ukuzuza Umqhudelwano Wokuncintisana
Ukufakaza ngesidingo esikhulayo sezimoto ezisebenza ngogesi nokulindela ukungena kwezimoto ezisebenza ngogesi ngokuzayo, izinkampani eziningana njengamanje zithambekele ekwethuleni amapulatifomu amasha e-EV ukuthola umncintiswano wokuncintisana esimweni samanje semakethe. Ngaphezu kwalokho, ngenkathi izinkampani ezisezingeni eliphakeme zanda ngokutshala imali ekukhiqizeni amapulatifomu e-EV, iziqalo eziningana zingene emakethe yesikhulumi se-EV yomhlaba, futhi zakha ubudlelwano bamasu nabanye abadlali bezimakethe ukusungula ubukhona bazo emakethe ye-EV yokuncintisana kakhulu. Isibonelo, i-REE Automotive, isiqalo sakwa-Israyeli singene kubambiswano neKYB Corporation yaseJapan ukwethula ukumiswa kwamapulatifomu ezimoto ezizayo zikagesi. I-KYB Corporation kulindeleke ukuthi inikeze umugqa wayo wezinhlelo zokumisa ezingasebenzi futhi ezisebenzayo zesikhulumi se-EV se-REE.
Ngaphezu kwalokho, ama-OEM amaningi aholayo aya ngokuya agxile ekwakheni amapulatifomu e-EV azinikele ukusungula ubukhona obuqinile emakethe. Isibonelo, ngoFebhuwari 2019, abakwaHyundai bamemezela ukuthi inkampani kungenzeka ikhiqize ipulatifomu ezinikele yemoto kagesi ezosetshenziswa ikakhulukazi yizimoto ezintsha zikagesi ezikhiqizwa yinkampani.
Ukufunwa Kwamapulatifomu e-EV kwehla ngo-2020 phakathi kobhubhane lwe-COVID-19
Umkhakha wezimoto zomhlaba jikelele uhlangabezane nezingqinamba ezinkulu ngowezi-2020 ngenxa yokugqashuka kwesifo senoveli i-COVID-19. Ukuqala kobhadane lwe-COVID-19 kususe ukukhula kwemakethe yesikhulumi se-EV yangena emzileni ohamba kancane ngo-2020, njengoba umkhakha wezimoto eChina wawukhiyiwe ikakhulukazi kwikota yokuqala ka-2020. Ngenxa yalokhu, ukulethwa kwezinto zokusetshenziswa futhi izingxenye zezimoto zithathe hit enkulu emhlabeni jikelele. Kodwa-ke, njengoba iChina ivula kancane kancane izimboni zayo, ezinye izikhungo ezinkulu zezimoto zazinqanda ukuhweba nokuhamba kwemingcele njengesilinganiso sokunqanda ukusabalala kwegciwane.
Imakethe yesikhulumi se-EV kulindeleke ukuthi kancane kancane ifinyelele umfutho ngasekugcineni kwekota ka-2020, njengoba isidingo somhlaba wonke sama-EVs sikhula ngokuzinzile kulandela ukukhululeka kwemikhawulo yokukhiya kanye nokuhweba.
Imakethe yesikhulumi se-EV yomhlaba kulindeleke ukuthi ikhule ku-CAGR elinganiselwe engu- ~ 3.5% ngesikhathi sesimo sezulu. Ukukhula kwemakethe kuqhutshwa ikakhulu yisidingo esikhulayo sezimoto ezisebenza ngogesi, ukwengeza ukwesekwa kukahulumeni kwezimoto ezisebenza ngogesi, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bezimoto ezisebenza ngogesi, kanye nokuqinisa imithetho nezimiso zokuvikela imvelo. Abadlali beMakethe kufanele bagxile ekwethuleni amapulatifomu ezimoto ezintsha nezingabizi kakhulu ukuthola umkhawulo wokuncintisana nokusungula indawo emakethe.
I-EV Platform Market: Ukubuka konke
Imakethe yesikhulumi se-EV yomhlaba kulindeleke ukuthi ikhule ku-CAGR ka-3.5% ngesikhathi sesimo sezulu. Lokhu ikakhulukazi kungenxa yezinkambiso zokungcolisa ezikhula ngokuqinile zezimoto ezihambisana nokwenyusa ukuxubana nokufakwa kukagesi ezimotweni ukuze kuncishiswe umthelela wamagesi ayingozi okukhipha imvelo emvelweni. Imithethonqubo kahulumeni emelene nezimoto zikadizili nophethiloli iyisizathu esikhulu sokushintsha okuthandwa ngamakhasimende ezimotweni zikagesi futhi kukhulise ukufunwa kwepulatifomu ye-EV ngesikhathi sokubikezela.
Imakethe yama-EVs iyanda ngesivinini esikhulu futhi nokutshalwa kwemali ekuqaleni kakhulu kuphakeme kakhulu emabhasini, njengoba ohulumeni ezifundeni eziningi betshala imali enkulu emadolobheni amakhulu ukuze babhekane nokukhishwa kwekhabhoni okungenzeka kukhulise imakethe yesikhulumi se-EV. Ipulatifomu ye-EV yamabhasi kagesi ifakazela ukufunwa okuphezulu eminothweni eminingi, njengoba ukufakwa kukagesi endaweni yomphakathi kungenzeka kube nomthelela omuhle ekwenzeni ngcono ikhwalithi yomoya.
Abashayeli be-EV Platform Market
Phambilini, izinhlobo ezinkulu bezincamela ukwakha ipulatifomu eyodwa yamamodeli amane amahlanu ukukhawulela ukutshalwa kwemali. Kodwa-ke, ukufunwa okwengeziwe kubathengi bezimoto zezici ezithile zesifunda, isitayela, nokusebenza, kufaka phakathi into ehlukile emotweni kwenze ama-OEMs ukuthi athuthukise ipulatifomu ehlukile yamamodeli ahlukahlukene, okungenzeka ukuthi ithuthukise imakethe yesikhulumi se-EV ngesikhathi sesimo sezulu.
Amafutha wezinsalela aphelile futhi maduzane, izinsalela zikaphethiloli kungenzeka ziphele. Ngokwesilinganiso samanje sokusetshenziswa, kulinganiselwa ukuthi iminyaka engama-46.7 yemithombo kaphethiloli isele emhlabeni wonke, futhi iminyaka engama-49.6 yemithombo yegesi yemvelo isele emhlabeni wonke. Ezinye izindlela zokubasa ezimbiwa phansi ziyatholakala emakethe, kufaka phakathi imoto kagesi, i-CNG, i-LPG, imoto ephehlwa umoya, ne-LNG. Kodwa-ke, izimoto ezisebenza ngogesi ziya ngokwamukelwa, ezisetshenziselwa ukuthutha emadolobheni amakhulu namancane. Lokhu, futhi, kungenzeka kube yisixazululo sokutholakala okuphelele kwemithombo yemvelo. Lokhu kulinganiselwa ukukhulisa imakethe yesikhulumi se-EV.
Abakhiqizi abaningana, abanjengoTesla Inc. kanye noNissan, sethule ama-EVs okusebenza asebenza epulatifomu entsha ye-EV ethule emigwaqeni futhi enikeza ukuhamba okubushelelezi nokungahambi kahle. Izindleko zokugcina eziphansi zama-EVs, ngenxa yokwakhiwa okusha epulatifomu ye-EV kube yinzuzo eyengeziwe, okungenzeka izuzise abathengi esikhathini eside esizayo. Lokhu, futhi, kungenzeka kuhambise imakethe yesikhulumi se-EV.
Izinselelo ze-EV Platform Market
Izindleko zezimoto zikagesi uma ziqhathaniswa nalezo ze-ICE ejwayelekile (injini yomlilo yangaphakathi) ziphakeme kakhulu futhi zithathwa njengezinto ezivimbela kakhulu imoto kagesi kanye nemakethe yesikhulumi se-EV
Izimoto ezinamandla kagesi zidinga iziteshi zokushaja, futhi inethiwekhi yeziteshi ezinjalo ezibekwe ngendlela efanele iyadingeka ukuze abantu bahambe amabanga amade. Ngaphezu kwalokho, ukushaja kabusha amabhethri kuvame ukuthatha cishe ihora elilodwa, okungahambisani ndawo nokusebenza kahle kwephethiloli yegesi, evimbela imakethe yesikhulumi se-EV.
Ukuhlukaniswa Kwemakethe Yesikhulumi se-EV
Ngokuya ngengxenye, ingxenye yebhethri kulindeleke ukuthi ilandise ngesabelo esikhulu semakethe yesikhulumi se-EV ngesikhathi sesimo sezulu. Ama-OEM agxila ekukhiqizeni ibhethri ye-EV ethuthukile okulindeleke ukuthi ibe nokukhishwa okuphansi ngezindleko eziphansi kakhulu, okuholela ekutshalweni okuningi ku-R & D engxenyeni yebhethri futhi ekugcineni kwesikhulumi se-EV.
Ngokuya ngohlobo lwemoto kagesi, ingxenye yemoto kagesi yebhethri iyanda ngesivinini esisheshayo semakethe yesikhulumi se-EV. Iningi lama-OEM ligxile ekwakhiweni kwezimoto zikagesi zebhethri kuzingxenyekazi ze-EV ezisanda kuthuthukiswa kunezimoto zikagesi ezi-hybrid, njengoba isidingo sama-BEV singaphezu kwalesi se-HEVs. Ngaphezu kwalokho, ukutshalwa kwezimali okukhulu kakhulu nobuchwepheshe kuyadingeka ukuthuthukisa i-HEV uma kuqhathaniswa naleyo ye-BEV, njengoba i-BEV ingafaki i-ICE kwipulatifomu ye-EV ngakho-ke kulula ukuyakha.
Ngokuya ngohlobo lwemoto, ingxenye yezimoto ezisetshenziswayo yaba nesabelo esikhulu semakethe yesikhulumi se-EV yomhlaba. Abathengi eChina bathanda ama-compact sedans; kodwa-ke, ukufika kwamaSUV amasha futhi akhanga kakhulu kudlulise ukufunwa kwezimoto ezisetshenziswayo. Kukhona ukwehla kokuthengiswa kwama-sedans. Azisizi njengama-hatchbacks noma avulekile kakhulu njengama-SUV nabathengi e-Asia nase-US bakhetha zombili izimoto ezivulekile nezisebenzisekayo. Ukwehliswa kwesidingo sezinto ezibuyela emuva kulo lonke elaseYurophu naseLatin America kungenxa yokwanda kosayizi wemoto encane. Uma ikhudlwana i-hatchback iba nkulu, ayisebenzi futhi ingalawuleki kalula.
Imakethe Yesikhulumi se-EV: Ukuhlaziywa Kwesifunda
Ngokuya ngesifunda, imakethe yesikhulumi se-EV yomhlaba ihlukaniswe yaya eNyakatho Melika, eYurophu, eMpumalanga Asia, eSouth APAC, eLatin America, naseMpumalanga Ephakathi nase-Afrika
Ukukhuphuka okungaguquguquki kokungena kwama-EVs ngejubane elibonakalayo emazweni amaningi aseMpumalanga Asia naseYurophu kuyisici esivelele esishayela imakethe yesikhulumi se-EV yomhlaba, njengoba utshalomali ku-R & D kula mazwe lukhula. IYurophu ibona ukwanda okunamandla kokungena kwama-EVs. Ngemuva kwalokho, isidingo sama-EVs kulindeleke ukuthi sikhule ngesikhathi sesibikezelo, okungenzeka ukuthi sikhulise imakethe yesikhulumi se-EV.
Imakethe yesikhulumi se-East Asia EV kulindeleke ukuthi ikhule kakhulu, ilandelwe yiYurophu neNyakatho Melika. Imboni yezimoto emazweni, kufaka phakathi iChina, iJapan, neSouth Korea ithambekele kubuchwepheshe, emisha, nasekuthuthukiseni ama-EV athuthukile. Ukwakhiwa kweziteshi zokushaja ezisezingeni eliphakeme futhi ezisheshayo kulindelwe ukuhambisa imakethe yesikhulumi se-EV ne-EV. I-BYD, i-BAIC, i-Chery, ne-SAIC abadlali ababalulekile abasebenza emakethe ye-East Asia EV, okubandakanya isabelo esiphezulu semakethe yesikhulumi se-EV.
Imakethe Yesikhulumi se-EV: Indawo Yokuncintisana
Abadlali abakhulu abasebenza emakethe yesikhulumi se-EV yomhlaba bafaka
Inkampani ye-Alcraft Motor
Amanye ama-OEM akhetha ukukhiqiza i-BEV noma i-PHEV kwipulatifomu ye-ICE eguquliwe ukukhawulela ukutshalwa kwezimali okuyinhloko futhi banesibopho sokukhiqiza okuguquguqukayo. Ukwakhiwa okwenziwe ngokweqile kwezimoto ze-ICE kubhekene nezinselelo ekufakweni kwebhethri. Isibonelo, i-VW Group ihlose ukwakha ama-EV wabo bonke osayizi isebenzisa izingxenye eziningana ezifanayo ukuze ikwazi ukwenza ama-e-modeli ayo abe yinzuzo. Inkampani ihlose ukwakha izimoto ze-MEB ezindaweni eziyisishiyagalombili, emhlabeni jikelele, ngo-2022. Ngaphezu kwalokho, ibikezela ukuthi izodayisa izimoto eziyizigidi eziyi-15 emsamo we-EV kule minyaka eyishumi ezayo.
E Ukuhamba ngebhayisikili, Ishaja yebhethri ehamba phambili yeLithium Motorcycle, I-Light Blue Motorcycle, Side Stand Puck, Mpintsha On Bike, 22.5 Amakhava Amasondo,